Izy io angamba no iray amin'ireo vokatra rafitra indrindra ao amin'ny tontolo miteny espaniola eo ambanin'ny lohahevitra geospatial. Ny tsy fananana an'ity antontan-taratasy ity dia heloka; Aza lazaina hoe tsy mahalala ny tetikasa alohan'ny hamakiana azy amin'ity lahatsoratra Geofumadas ity. Azo inoana fa ny vokatra toy ny ...
ArcView Google Earth gvSIG OS samy hafa GIS QGIS
Alibre dia anaran'ny orinasa iray, izay niavian'ny anarany amin'ny teny latinina Liber, izay niavian'ny fahalalahana, liberaly, libero; raha fintinina ny fahatsapana fahalalahana. Ary ny tanjon'ity orinasa ity dia mifototra amin'ny fanomezana vokatra avo lenta amin'ny vidiny mahagaga. Mampiseho amintsika ny tantara fa ...
Autodesk dwg samy hafa GIS
Egeomates, afa-tsy sary
Volana sarotra amin'ny fotoana, fa mahafa-po ny zava-bita sy ny filan'ny fianakaviako miaraka amin'ny zanako sy ilay zazavavy manazava ny masoko. Zara raha afaka namoaka indroa aho, ity misy famintinana sary fohy. Ny fizotry ny fanamarinana amin'ny alàlan'ny fahaiza-manao. Traikefa tena mahaliana, famelabelarana ny fenitra fanamarinana, banky entana, ...
GPS samy hafa GIS My egeomates
My egeomates, Tsangatsangana
Ny fanaovana fanadihadiana momba ny cadastral miaraka amina gara iray manontolo, ankoatry ny fananana ny milimetatra, dia mety ho ilaina amin'ny tanjona hafa, satria manana ny haavon'ny isa tsirairay isika. Andeha hojerentsika amin'ity tranga ity, ny fomba famoronana tsipika contour, izay efa hitantsika tamin'ny AutoDesk Civil 3D, miaraka amin'i Bentley Geopak sy Manifold GIS, toy izao ...
Autodesk Bentley Systems DGN GPS samy hafa GIS
ArcGIS-ESRI, cadastre, Featured, GPS / Fitaovana, topografia
CAD / GIS sehatra tsy maintsy mandeha any amin'ny GPU
Isika izay mpampiasa rindran-tsary dia manantena hatrany fa hanana fahatsiarovana miasa ampy ireo solosaina. Amin'izany, ny programa CAD / GIS dia nanontaniana na norefesina foana arakaraka ny fotoana laniny hanaovana hetsika isan'andro toy ny: Fanadihadiana ara-nofo Fanitsiana sy fisoratana anarana sary Fitantanana ny fametrahana angon-drakitra mason'ny ...
Autodesk samy hafa GIS
fanavaozana, My egeomates